Fanazavana ireo sary an’ohatra 1 - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
Ny RANO, na RANOMASINA na RANOBE na ONY
Ny RANO, na RANOMASINA na RANOBE na ONY dia milaza VAHOAKA na FIRENENA na OLONA.
Hitantsika izany tao amin‟ny Isaia 17:12-13 «12 [Ny handringanana ny Asyriana] Indrisy ny fihahohahon’ny firenena maro! Izay mihahohaho tahaka ny feon’ny ranomasina! Indrisy ny firohondrohon’ny olona maro be! Tahaka ny firohondrohon’ny rano manonja ny firohondrohony! 13 Eny, mirohondrohona tahaka ny firohondrohon’ny rano be ny firenena; kanefa hotezerana mafy izy, ka dia handositra lavitra ary ho lasa tahaka ny akofa eny an-tendrombohitra, raha paohin’ny rivotra, sy tahaka ny fakom-bary mitambolimbolina entin’ny tadio. »
Toy izany koa ao amin‟ny apokalypsy 17:15 « Ary hoy izy tamiko: Ny rano efa hitanao, izay ipetrahan’ilay vehivavy janga, dia olona sy vahoaka betsaka sy firenena maro ary samy hafa fiteny. »
Raha milaza rano izy izany na ranomasina na ony dia milaza vahoaka na firenena izy izany.
Ny BIBIDIA na BIBY; TANDROKA
Raha milaza indray izy hoe BIBIDIA na BIBY dia milaza MPANJAKA na FANJAKANA no heviny,
Raha milaza TANDROKA izy dia mety milaza MPANJAKA na FANJAKANA ihany koa no heviny.
Ka raha mahita izany isika hoe bibidia iray manana tandroka folo, dia midika hoe firenena iray izay manana mpanjaka folo io izany.
Raha raisintsika ohatra izany ny eto Madagasikara ka ataontsika hoe misy PDS 6 izay tarihin‟ny Filoham-pirenena iray dia azo lazaina hoe: bibidia iray izany ity firenena Malagasy ity, ka manana tandroka iray lehibe izay hodidin‟ny tandroka enina kely manodidina azy, izany no hilazana azy. Ny tandroka lehibe izany, dia ambara hoe ilay filoha mitondra ny firenena malagasy, ary ilay tandroka kely enina kosa indray izany dia ireo PDS miara-mitondra aminy.
Fa ankehitriny dia efa nosoloina tandroka 22 izy ireo. Ka tsy dia tokony hahataitra izany, raha milaza tandroka na hoe bibidia izy ato amin‟ny boky apokalypsy, satria code hilazany zavatra izany. Fa misy mantsy tonga dia taitra raha vao milaza hoe bibidia, tonga dia misendaotra milaza hoe: nahoana izahay no lazainao hoe bibidia? Satria tsy mahalala ny hevitry ny bibidia ilay olona, dia angamba lazainy fa ireo bibidia any an‟ala ilay izy; fa mazava tsara fa milaza fanjakana no ambarany amin‟izany, ary ny tandroka dia milaza mpitondra.
Ny hoe RAMBO dia milaza MPAMINANY MAMPIANATRA LAINGA
Isaia 9:14 « (Ny loholona sy ny manan-kaja no loha, ary ny mpaminany izay mampianatra lainga no rambo); »
Ka ireny rehetra ireny na mopera, na pasitera, na presbitera, na episkopo, na iza na iza, ka mampianatra lainga, dia ireny no antsoina hoe rambo.
Ny loha dia entina milaza ny loholona na ny manankaja ao amin‟ny fiangonana. Ny loholona dia ireo efa ela niainana sy mahafehy tsara ny fiangonana, izany hoe ireo ray aman-drenim-piangonana izany Isaia 9:14 « (Ny loholona sy ny manan-kaja no loha, ary ny mpaminany izay mampianatra lainga no rambo); »
Manana endrika roa ny liona: ny mibahan-toerana indrindra amin‟izay mety ho heviny, dia midika ho devoly sy satana izany liona izany:
Isaia 5:29 « Ny fierony dia tahaka ny fieron’ny liom-bavy, Ary mierona tahaka ny liona tanora izy; Eny, manerona izy ka mandrapaka ny toha, Dia lasany, ka tsy azo alaina intsony. »
1 Petera 5:8 « Mahonòna tena, miambena: fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay harapany; »
Fa mety ihany koa maka ny endriky ny mazava izany liona izany, ka rehefa izay no ilazany azy, dia Jesosy Kristy no sary asehony amin‟izany:
Apokalypsy 5:5 « Ary ny anankiray tamin’ny loholona* nanao tamiko hoe: Aza mitomany; indro, ny Liona avy amin’ny firenen’i Joda, diany Solofon’i Davida, no efa naharesy ka hanokatra ny boky sy hamaha ny tombo-kaseny fito. [* Gr. Presbytera] »
Genesisy 49:9 « Zana-diona, Joda, avy niremby ianao, anaka; mamitsaka, mandry toy ny liona izy, ary toy ny liom-bavy, ka iza no hanaitra azy! »